Yini ukudla okukhulu futhi bahlobise yobukhona babo akuyona izitshalo eyodwa infield - ithanga kutshalwa! Ngenxa ukunambitheka layo eliyingqayizivele inamba engafani eyaziswa izingxenye eziwusizo, ithanga, ngakwesokudla, inendima enkulu ethebuleni ekwindla.
Ukuthola isicelo ekuphekeni, abantu imithi, Cosmetology, kusisiza balahle eziningi izifo, nihlambulule umzimba futhi kuholele ukubukeka isimo ezifanele. Ithanga ulusizo zonke: imbewu, nenyama yaso, ikakhulukazi uwoyela, ekhishwe imbewu.
Amafutha ithanga ngokuthi igolide eliluhlaza. NgeNkathi Ephakathi, ukuthenga imali encane yamafutha ayengakwenza nje inkosi abacebile. Okwamanje, leli thuluzi zonke singatholwa yinoma ubani.
Umzimba zingathola kuwo ubungqabavu. It has a ukunambitheka emnandi futhi ngempela ezijabulisayo, flavour oqinile. Anqume izinga amafutha kungenzeka ukuhogela ke. Fresh ezinhle umkhiqizo izinga ayinakho iphunga nezingahlobene nendaba noma lokukhunta. Amafutha ithanga noma kunjalo akufanele abe ukunambitheka Rancid. ukunambitheka kwalo kufanele zifane iphunga ithanga obusanda kusikwa noma imbangela inhlangano imbewu kancane okugazingiwe. Futhi abekho amanothi okunamafutha!
uwoyela Ithanga has a lokuhlushwa eliphezulu polyunsaturated okunamafutha acid, linolenic futhi acid linoleic. Lezi izinto optic wusizo umzimba. Le nhlanganisela kuyindlela olukhulu emafutheni, nokuba okuvela ezilwaneni. Ukwazi ukubaluleka kwalo mkhiqizo, ngokuqinisekile bonke abantu abayofuna afake ekudleni kwakho ibhotela ithanga. isicelo sayo kuyisisekelo ngendlela enempilo nokudla ukudla okunempilo.
Ukuhlaziya ukubaluleka ithanga, asikwazi kuqale izinto obhekene intsha nobuhle - ngamavithamini A no E. Ubani omunye ngaphandle zisiza ukuba alwe imibimbi ngokweqile?! Okuqukethwe vitamin K unomthwalo igazi ekunqandeni, ithanga ungumholi phakathi nezinye imifino. Kakhulu ezingavamile Vitamin T kusiza ukugaya ukudla esindayo futhi benenkinga ukukhuluphala.
Amafutha ithanga imbewu anezakhi anti-sclerotic, anti-iguliswa futhi anti-isilonda. Siqukethe eziyinkimbinkimbi Lokudabuka yemifino - phospholipids ebalulekile. Ngaphezu ukulawulwa ulwelwesi permeability futhi oxidative phosphorylation izinqubo, umphumela eyaziwa anobuthi phospholipids, ukuhileleka kwabo lipid umzimba nekulawulwa triglyceride cholesterol.
Ukuntuleka kokukhulumisana izinto eziwusizo alikho umkhiqizo elinjalo, linjengamafutha ithanga. Ukusetshenziswa yayo multi enamazinyo. Kusukela izifo yangaphandle isikhumba ngaphambi kokungenisa ngesikhathi biliary isifo ipheshana zokuvimbela (umphumela wawo choleretic Sekuyisikhathi eside kwaziwa). Amalungiselelo kusuka imbewu ithanga uthole isicelo e izifo zesibindi - sokuwohloka futhi ziphathwe yisifo sokuqina; cholecystitis kanye kwesibindi; kolwelwesi futhi peptic isilonda isifo. Suppositories iphathwa rectally nokuqukethwe amafutha i-adenoma, hemorrhoids, prostatitis futhi emifantwini bendunu.
uwoyela Ithanga is kabanzi nezesikhumba, lapho ngempumelelo elwisana psoriasis, bedsores, izilonda trophic kanye eczema. Ungakhohlwa-ke, futhi emkhakheni wezokwelapha ezifana amazinyo ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane. Esimweni sokuqala isetshenziselwa stomatitis kanye periodontitis; Okwesibili - lapho coleitis, ukuguguleka komhlabathi wesibeletho, endotsirvetsite. Ngisho ekulweni ezithile izibungu kusiza lo mkhiqizo esiyingqayizivele.
uwoyela Ithanga imbewu - an isithako esihle lichaza ekwakheni balms, buso kanye okhilimu. Luhle ukubhucungwa umzimba kanye ukulibopha. Esinye isici esibalulekile lo mkhiqizo omangalisayo, ngaphezu ukuthambisa, amafutha kanye nokudla - ke kuyinto engokwemvelo UV isihlungi isikhumba womuntu.
Yisebenzise ekudleni kwakho futhi uyozizwa enempilo futhi bejabule njalo!
Izidakamizwa Antiemetic e nokwelashwa ngamakhemikhali: ekwelapheni isicanucanu e abanomdlavuza
LCD "Youth" Podolsk: kunjiniyela "Stroiservis", ikheli, ukubuyekezwa